Dib u eegida Moto 360: kuwani waa gabagabadayada | Androidsis
Alfonso ee Miraha | | Reviews, Smartwatch
El Moto 360 horay u yimid Spain. Mid ka mid ah smartwatches-ka ugu soo jiidashada badan oo ay ugu mahadcelineyso nashqadeyntiisa taxaddarka ah taasna waxay u sii socotaa si ay ula tartanto miisaanka culus sida G daawo r ama Samsung Gear S.
Aniga oo ka faa'iideysanaya bilowga rasmiga ah ee 'Moto 360' ee Isbaanishka maanta waxaan kuu keenay a Moto 360 dib u eegis ka dib seddex isbuuc oo la isticmaalay halkaas oo aan ka soo saari doono dhammaan sirta Motorola smartwatch cusub.
1 Naqshad soo jiidasho iyo qurux badan
2 Astaamaha farsamada ee Motorola Moto 360
4 Mudo intee le'eg ayuu batteriga Moto 360 socon doonaa?
Naqshad soo jiidasho iyo qurux badan
Waxaa jira wax aan cidina diidi karin: Moto 360 waa a runtii smartwatch fiican. Naqshaddiisa wareegsan, oo ka soocan inta badan tartameyaasha iyo qalabka loo adeegsado dhismaha jirka Motorola wearable waxay caddeynaysaa in soo-saaruhu uu raadinayo terminal muuqaal ahaan raalli ka ah.
Ka samaysan aluminium iyo leh jir ahama Moto 360 wuxuu leeyahay dhammeystir cajiib ah, oo siinaya dareen adkeysi ay dadka isticmaala jeclaan doonaan. Muuji iftiinkeeda la yaabka leh, culeyskiisu waa 49 garaam oo keliya, taas oo ka dhigaysa Moto 360 inaysan ka xanaaqin curcurka. Shakhsiyan, ma aanan isticmaalin saacad waqti dheer iyo, inkasta oo markii ugu horeysay ay ahayd wax la yaab leh in lagu xiro Moto 360 ee curcurka, markii aan la qabsaday, runtu waxay tahay inay runti tahay raaxo iyo iftiin.
Waan kala dooran karnaa naqshadaha kala duwan ee wajiga saacadda, laga soo bilaabo kuwa ugu caansan ee leh cirbadaha astaamaha, iyada oo loo marayo naqshad aad u yar. Halkan dhadhanka midabada, in kastoo aad haysato moodello kugu filan oo aad ku heli karto mid aad jeceshahay.
Faahfaahin kale oo xiiso leh ayaa ah suunkeeda. Ka samaysan maqaar, waxay si fiican isugu dhafan tahay naqshada guud ee qalabka oo taabashadiisu waa wax wacan. Motorola waxay ka fakartay faahfaahinta oo dhan waana ogolaatay suunka Moto 360 waa la is weydaarsan karaa, in kastoo aniga shaqsiyan aan jeclahay suunka asalka ah. Xidhitaankeedu waa mid raaxo leh iyo muuqaal soo jiidasho leh. Uma baahni wax intaa ka badan.
Waxa kaliya ee aan ka heli karo naqshaddiisa wanaagsan waa cabbirka qalabka. Moto 360 ma ahan smartwatch yar sidaa darteed dumarka qaar oo leh curcurada yar yar waxay ka heli doonaan xoogaa gogol ah.
In kasta oo ay run tahay in arrinta naqshadeynta ay tahay mid shakhsiyan ah, qof walbaa wuxuu leeyahay ra'yigiisa, shaqsiyan waan jeclahay wax badan waxayna muujineysaa in Motorola ay diiradda saartay hal shay: sameynta smartwatch wuxuu umuuqdaa saacad caadi ah. Mana jirto cid dafiri karta in kooxda Big M ee nashqadeynta ay ka guuleysatay wax ka badan. Moto 360 waxaa lagu heli karaa laba midab: madow iyo qalin.
Astaamaha farsamada ee Motorola Moto 360
1.56 inch LCD 320 × 290 pixels (205 dpi) Muraayadaha Gorilla 3.46mm iyo dhumucda 11.5mm Android Wear Android 4.3 ama ka sareeya IT OMAP 3630 512 MB
4 GB Bluetooth 4.0; pedometer; dareeraha iftiinka jawiga iyo dareeraha garaaca wadnaha Shahaadada IP67 320 Mah
El Qalabka Moto 360 wuu xadidan yahay, wax caadi ah tan iyo markii aan ka hadlayno smartwatch, in kastoo ay jiraan qodobo niyad jab leh. Mid ka mid ah waa waxqabadka batteriga, oo aan gadaal ka hadli doonno mid kalena waa processor-kiisa.
Moto 360 wuxuu isku darayaa aaladaha Texas OMAP3630 SoC, a processor dhacay waqtiyada iyo soo saaraha ku dhowaad in lagu iloobo suuqa Android. In kasta oo ay run tahay in waxqabadka Motorola smartwatch uu ka badan yahay in ku filan, haddana waa wax lala yaabo in ay adeegsadaan processor-kii hore ee noocan oo kale ah marka ay tartamayaashoodu dhexgalaan Snapdragon 400. In ka badan haddii aan tixgelinno in Moto 360 uusan si sax ah uga raqiisanayn kuwa la tartamaya.
Waxaan ku qanacsanahay shahaadadaada IP67 inaan annagu wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku maydhanno dhibaato la'aan saacadda marka lagu daro inaad na siiso iska caabin weyn oo boodhka ah. Faahfaahin kale oo ka duwanaaneysa tartamayaasheeda waa dareemayaasha garaaca wadnaha, oo aad barnaamij u samayn karto si aad u qaadato garaaca wadnahaaga maalin kasta. Imtixaanadii aan qaaday waxaa jiray waqtiyo aysan garaneynin garaaca wadnaha, wax aan lagu xallin karin dib u tijaabinta dhowr jeer, laakiin aakhirka waxay noqon kartaa mid xanaaq badan daqiiqadaha qaarkood.
Faahfaahin kale oo la yaab leh ayaa ah shidma iftiinka jawiga taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan automate ka dhigno iftiinka shaashadda iyadoo kuxiran xaalada aan kujirno. Waxaan hagaajin karnaa ikhtiyaarrada sida nalka deegaanka si saacaddu u muuqato mid ka wanaagsan, in kasta oo ay si dhakhso leh u baabbi'in doonto batteriga.
Haddii aad rabto inaad dhaqaajiso shaashadda saacadda, waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad curcurkaaga u jeediso si aad waqtiga u aragto isla markaana si otomaatig ah ayuu u soo baxayaa. Si aad u damiso shaashadda, gacantaada saar oo dareemaheeda iftiinka ku hareeraysan ayaa sameyn doona inta soo hartay.
Android Wear ayaa mas'uul ka ah sameynta Moto 360 garaacis. Wax yar ayaan kaaga sheegi karaa nidaamka qalliinka ee Google la gashan karo ee aadan horay u aqoon. Marka la soo koobo, in la dhaho waxay si fiican u shaqeysaa Moto 360. Ma ahan mid dareen badan marka hore, laakiin marka aad hesho hakinkeeda waa wax aad u fiican in la isticmaalo.
Mootada 360 wuxuu dhexgalaa makarafoon aad u adeegsan karto inaad ku dhaqaajiso amarro cod oo taxane ah oo loo maro Google Now, sida qaadashada qoraal ama garaaca wadnahaaga. Waxaa jira faahfaahin ah in maskaxda lagu hayo: Moto 360 kuu oggolaan maayo inaad ka jawaabto wicitaanada. Shakhsiyan, ma arko aniga oo ka hadlaya saacaddayda, in qof kasta oo ogaada sheekadayda uu umuuqdo mid aan raaxo lahayn, in kastoo ay fiicnaan lahayd inaan awood u yeesho inaan isticmaalo intaad baabuur wado. In kasta oo taasi aad u dhaqaajineyso gacanta-bilaashka ah ee casrigaaga waana taas.
Saacaddu waxay umuuqataa mid aad ufiican oo qalabkeedu waa mid aad ugafiican inuu kusii wado si habsami leh. Hadda waa waqtigii laga hadli lahaa Moto 360 shaashad. Cabbirkeedu yahay 1.56 inji iyo xallinta 320 x 290 pixels, marka lagu daro cufnaanta 205 dpi, wejiga Moto 360 ma aha wax lagu farxo.
In kasta oo ay run tahay inay u egtahay wax quruxsan, haddana waxaa jira waqtiyo marka waad awoodi doontaa inaad qadariso pixels-ka, qaasatan markaad hesho ogeysiin aad ku arki doontid sawirka profile-ka qofka kuu soo diray. Wax badan ayaa laga sameeyay aaladda dareeraha nalka. Runtu waxay tahay in marka hore ay wax badan dhibto. Markuu arkay in saacaddu aysan ahayn mid wareeg ah, sababta oo ah xariijimahaas madow ee gebi ahaanba jebinaya nashqadda, waa wax laga xumaado, maxaa loo diidaa.
Markii hore waxaan sii fiirinayay karbaash madow, inkasta oo dhawr maalmood oo la isticmaalo ka dib aakhirka aad illowdo gebi ahaanba. Tani waxay ahayd mid ka mid ah qodobbadii aniga aad ii sii walwal geliyay, in kasta oo xaqiiqda ah in aakhirka aad aakhirka iska indhatirto "khaladka" xanaaqa badan la qadariyo.
Arrin kale oo aanan aad u jeclayn ayaa ah ta ku wareegsan hareeraha wareega. Kalagoynta isku xidhka ee udhaxeeya birta meertada ah iyo abuurku waxay abuuraan a saameyn qaansoroobaad in, iyada oo aan laga xanaaqsanayn isticmaalkeeda, aysan u muuqan wax qurxin qurux badan. Dhibaato muuqata marka la helo ogeysiisyada.
Ma aanan jeclayn Waxqabadka Moto 360 bannaanka. Deegaan kasta oo xiran, Motorola smartwatch wuxuu umuuqdaa mid hagaagsan, laakiin maalinta qoraxdu waxbaa isbadala. Iftiinka ugu sarreeya ayaa noqda mid lama huraan ah, oo keena hoos u dhac ku yimaada waxqabadka batteriga.
Ugu dambayntii dhibaato kale ayaa jirta. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu dhibsashada badan taleefannada casriga ah ayaa ah faro laga qaaday shaashadda. Moto 360-ka dhibaatadani waxay noqoneysaa mid muuqata oo waqti yar gudahood waxaad kuheli doontaa aagag ay ka buuxaan astaamo dhijitaal ah. Shar ka yar laakiin kan ay tahay in lagu xisaabtamo.
Mudo intee le'eg ayuu batteriga Moto 360 socon doonaa?
Mid ka mid ah arrimaha ugu muranka badan ee la xiriira Moto 360 waa ismaamulkeeda. Waqtigaas waxaa jiray khilaaf badan maxaa yeelay baytarigu wuxuu ahaa 300 Mah oo aan ahayn 320 Mah sida ay ku dhawaaqday soo saaruhu, in kasta oo ugu dambayntii Motorola ay tillaabada tilmaamayso in ismaamulku runti yahay 320 Mah xitaa haddii batterigaagu tilmaamayo koronto yar.
Dhibaatadu waxay tahay inaanan kuu sheegi karin in Moto 360 uu socdo saacado X ah sabab fudud: isticmaale kasta waa adduun. Waxay kuxirantahay sida aad u isticmaasho saacada iyo ogeysiisyada aad hesho, batteriga wuu sii socon doonaa wax badan ama ka yar.
Waxaan shakhsi ahaan tijaabiyey Moto 360 leh Cusboonaysiinta KGW42R taas oo balanqaadaysa ismaamul ilaa 28 saacadood leh adeegsi dhexdhexaad ah. In kasta oo haddii aad dhaqaajiso dhammaan ogeysiisyada, samee raadinta codka iyo shaqooyinka kale ee la heli karo waxaa loo dhimi doonaa illaa 16 saacadood.
Khibradeyda shaqsiyadeed wey kala duwaneyd iyadoo kuxiran maalmaha. U adeegsiga saacadda qaab dhexdhexaad ah, si loo hubiyo waqtiga, loo helo ogeysiis iyo in yar oo ka mid ah xulashooyinka kale ee Moto 360, smartwatch-ka ayaa igu qaatay maalin aan dhibaato badan lahayn.
Laakiin waxaa jirtay maalin sabab kasta aan u siiyay xoogaa yar oo bakoorad ah oo halkan saacaddu waxay igu khiyaanaysay qaab xun oo murugo leh, oo igu kaliftay inaan ku xayirmo 20:00 fiidnimo. Ma qiyaasi kartid wajiga nacasnimada ah ee aad leedahay marka aad xiraneyso a Saacadda 250 euro oo aan xitaa sheegi karin waqtiga. Taasi waa sababta ay rarkeeda maalinlaha ahi u tahay lagama maarmaan oo lama huraan.
Oo waa taas Moto 360 ma laha isku xira microUSB. Motorola ayaa xilligaas sheegtay inay dooneysay Moto 360 inuu yeesho muuqaal la mid ah saacadda caadiga ah, iyadoo aan la helin wax kala soocaya. Sidii aan horayba u soo sheegay, naqshaddu waa wax fiican, in kasta oo baahida loo qabo saldhigga lacag la'aanta ah ay dhib noqon karto.
Sidaad ogtahay, Moto 360 waxay la socotaa a saldhig ku amraya wax soo saarka microUSB kaas oo, marka la dhigayo smartwatch, u dhaqmaya sidii saacad desktop ah. Muuqaal ahaan waxay umuuqataa mid aad ufiican waxaadna arki kartaa sidoo kale inta la rartay. Dhibaatadu waxay timaaddaa markaad banaanka seexato.
Haddii sabab kasta ha noqotee aadan maalintaas ku qaadan guriga oo aadan qaadan saldhigga lacag-bixinta, maadaama aad Moto 360 aad u isticmaasho maalinta xigta ma awoodi doontid inaad lacag ka qaadatid, sidaas darteed waxaad yeelan doontaa saacad xiiso leh oo kuu sheegi maayo waqtiga curcurkaaga ilaa aad xamili karto. Dabcan, saacad qurux badan, laakiin taasi wax faa'iido ah ma leh.
Ma jecli muuqaalkan gabi ahaanba. Ma eedeynayo Motorola, maxaa yeelay waxqabadka baytariyada tartamayaasheeda ugu waa weyn ma ahan inay toogtaan gantaallo sidoo kale, laakiin inaan saacad saacad walba lacag ka qaado waxay ila tahay nasiib darro.
Waa wax fool xun in aad qaadato saldhiga lacag bixinta meel kasta, taas waxaa ka sii daran xaqiiqda ah in haddii sabab kasta ha noqotee aad ku seexato meel ka baxsan guriga, waxay u badan tahay inaysan sii socon doonin muddo kugu filan. Xukunkeyga ku saabsan arrintan waa cad yahay: Weli wax badan ayaa u baahan inay horumariyaan marka loo eego waxqabadka batteriga. Iyadoo la tixgelinayo in saacaddu ku kacayso 250 euro, xalalka waa in la raadiyaa si loo helo tiknoolajiyad wax ku ool ah.
La jaanqaadida qalab kasta oo Android ah
Ismaamul aad u xadidan
Baarka dareeraha iftiinka ee shaashadda ayaa dhibsanaya
Motorola Moto 360 waa smartwatch ka soocan inta kale naqshadiisa soo jiidashada leh iyo dhameystirka tayada. Laakiin waxqabadka batteriga ayaa wali ah nacasnimo, sida inta badan smartwatches. Miyaad bixin laheyd 249 euro Moto 360 ah? Si daacadnimo ah, anigoo tixgelinaya in waxqabadka tartamayaashu ay aad isugu egyihiin, waxaan u arkaa taas Moto 360 ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican.
Si fudud xaqiiqda ah in waa saacadda ugu soo jiidashada badan xilligan, iyada oo ruqsad laga haysto G Watch R, taas oo Moto 360 ka dhigaysa mid muuqata marka la barbardhigo tartamayaasheeda. Laakiin waxaan u maleynayaa in, in kasta oo dharka la gashan karo hadda uu ku jiro moodal, inbadan oo ka mid ah ayaa loo baahan yahay in lagu hagaajiyo tikniyoolajiyad ahaan si ay ugu suurta gasho adeegsiga qalabkan maalin kasta.
Waxaan idhi, haddii aad jeceshahay naqshadeynta ha ka waaban, Moto 360 kaaama deyn doono, Waan kuu dammaanad qaadayaa. Laakiin haddii arrinta ku saabsan waxqabadka bateriga ay tahay mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan adiga, waxaad si fiican u sugi kartaa jiilka soo socda ee smartwatches si ay u arkaan haddii ay xal u heli karaan dhibaatadan. Waxaa laga yaabaa inay la timaado baytariyada qaloocsan ...
Ha iloobin inaad soo booqato qaybtayada ugu fiican Barnaamijyada 'Android Wear', meesha aan sida ugu fiican ku tusi doono barnaamijyada loogu talagalay wearashada aad jeceshahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Dib u eegista Moto 360, smartwatch-ka ugu soo jiidashada badan ee wata 'Android Wear'
Weli waxay iila muuqdaan doqonnimo weyn aniga, meelna ugama adeegsan karo
Garaaca wadnaha? 4-ta adag waxad ku jirtaa saacadaha dechatlon iyo kuwa kale
Waqtiga? Waxaan ku ogahay anigoo fiirinaya qorraxda
Ogeysiisyada? waan qoslaa
Wicitaanada? Isku mid
Waxaan ahay taageere kan cusub laakiin daqiiqad sug
Anigu ma ihi gelipollas mana iibin doontid mid ka mid ah kuwan (ugu yaraan ilaa ay ka helayaan 20 euro) heh heh
Ku jawaab luis manuel
Waad ilaawaysaa meelkasta smartwatch 3, oo ah midka ugu waxqabadka wanaagsan gadaashiisa qalabka 's', taasi waa, kala bar qiimaha kan dambe oo ka raqiisan mootada 360 iyo r maxaa